नझुक्किनुस्, तपाईँले भोट हाल्दैमा मिस वर्ल्ड नेपालले जित्ने हैन – MySansar
टप ३० मा छानिसकेपछि मात्रै अर्को बाटो खुल्ने हो। टप ३० मा पुर्‍याउन मज्जाले भोट गर्नुस्। सघाउनुस्। तर भोट हालेरै मिस वर्ल्ड जितिन्छ भन्ने भ्रममा चाहिँ नपर्नुस् है।
3 thoughts on “नझुक्किनुस्, तपाईँले भोट हाल्दैमा मिस वर्ल्ड नेपालले जित्ने हैन”
Madhu kunwar says:
जित हार आफ्नो ठाउं मा छ भोटले नेपालीको एकतालाई अझै बलियो बनाउछ। आयोजक नै अचम्ममा परेको छ नेपालीको भोट देखेर यस ले नेपालीमा एकताको भावनाको परिचय झल्काउछ। च्यसैले आयोजकले फेरी दुई दिन भोट खुला गरेको थियो। सकारात्मक बनौ सोचौ
Dinesh waiba says:
भोट हाल्ने कुरा मा हामी नेपाली अगाडी छौ ! काम नपाएकाहरू दिनभरी प्रशान्त तामांग लाई भोट गर्दै हिड्थे ! तपाइको कुरा सहि हो , मिस वर्ल्ड भोटिंग बाट जितिने हैन ….भोटिंग बाट जितिने भए १०० करोड जनसंख्या भएको चिन ले जिती हाल्ला नि , ३ करोड जनसंख्या भएको नेपाल ले जित्ला र ?
तर हामी नेपाली को आफ्नै नियम छ, जे पायो त्यहि फेसबुक मा पोस्ट गरिदियो, अनि त्यसैको पछाडी दौडियो !!!!!
LeaveaReply to Dinesh waiba Cancel reply